ဇရာ တံခါးခေါက်သံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဇရာ တံခါးခေါက်သံ
Posted by weiwei on Dec 24, 2011 in My Dear Diary | 38 comments
wei's wish ဇရာ
“မမ .. ဆံပင်ဖြူတစ်ချောင်းတွေ့တယ် .. နှုတ်လိုက်ရမလားဟင် ….” ကျွန်မညီမလေးက ဆံပင်ညှပ်ပေးရင်း ရုတ်တရက်မေးလိုက်တယ်။
“ဟင် .. တကယ်လား … မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် … အနက်ကပြောင်နေတာကိုများ မျက်စိမှားတာလား” မယုံကြည်တဲ့လေသံနဲ့ ပြန်မေးလိုက်မိတယ်။
“သေချာပါတယ်ဟာ … ဆံပင်ဖြူအစစ်ပါ … မယုံရင် နှုတ်ပြမယ် …” နှုတ်ပြီး ကျွန်မလက်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ်။
“ဟယ် … ဟုတ်ပါရဲ့ … ထပ်ကြည့်ပါအုန်း ရှိသေးလားလို့ …”
“မရှိတော့ဘူး … တစ်ချောင်းထဲပါပဲ …”
ဒီတစ်ခေါက် ဇရာတံခါးခေါက်သံက တော်တော်ပြင်းသွားပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် သေချာကြားလိုက်ပြီး တုန်လှုပ်မိသွားပါတယ်။ လူ့သက်တမ်း ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက် ရောက်နေပေမယ့် ဆံပင်တစ်ချောင်းမှ မဖြူသေးတာကို ဂုဏ်ယူခဲ့သမျှ သွားပါပြီ … အဖွားကြီးစာရင်းဝင်သွားပြီ … ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ထပ်တူ သံဝေဂစိတ်တွေလဲ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်မှာပဲတဲ့ … လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရုပ်မှုန်လေးတွေရဲ့ ပျက်စီးမှုက တစ်စက္ကန့်မှာ ကုဋေငါးထောင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့ … အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ သဘောတရားတွေကို မြင်အောင်ရှုကြည့်ရမယ်တဲ့ … ဘယ်လိုပဲ ဘုရားဟောခဲ့ဟောခဲ့၊ ဘယ်လောက်ပဲ တရားနာနာ၊ တရားတွေ အကြိမ်ကြိမ်ထိုင်ကြသော်လည်းပဲ ခဏတာပါပဲ။ အရာအားလုံးကို မြဲသည်လို့ပဲ ထင်နေတတ်ကြတာ လူ့သဘာဝသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အသက်ကြီးလာပြီလို့ သိနေပေမယ့် ဇရာကို ဥပေက္ခာပြုနေခဲ့မိတယ်။ ဇရာက နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း တိုးတိုးလေး တံခါးလာခေါက်လေ့ရှိပေမယ့် မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့မိတယ်။ ရွယ်တူတွေကြားထဲမှာ အနုနယ်ဆုံးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ သူများတွေမြှောက်ပြောတာကို သာယာရင်း ဇရာဆိုတာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေခဲ့လိုက်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ကျွန်မက အလွန်ကျန်းမာရေးကောင်းနေသေးတယ်လေ။ ဆံပင်ဖြူနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ တစ်ပင်မှ မဖြူသေးဘူးလို့ ဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါတယ်။ အ၀လွန်တွေကြားမှာ ဘော်ဒီထိန်းနေနိုင်သေးတယ်။
ရွယ်တူတွေနဲ့ သွားနှိုင်းယှဉ်နေမိပြီး ကျေနပ်နေမိတာ ကျွန်မအမှားပါပဲ … တကယ်တော့ မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဇရာဆိုတာကို သတိထားမိနိုင်တာပေါ့နော်။ ကျွန်မက သတိထားမိမှာစိုးလို့ မှန်သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ မျက်စိတော်တော်မှုန်တဲ့ကျွန်မက မှန်ကြည့်ရင်လဲ မျက်မှန်မတပ်ပဲကြည့်တယ်လေ။ ခပ်မှုန်မှုန်နဲ့ဆိုတော့ သေချာမမြင်ရတော့ ဇရာကိုလဲ မသိတော့ဘူးပေါ့။
ကျွန်မက ယနေ့အထိ သဘာဝအတိုင်းပဲ နေပါတယ်။ မိတ်ကပ်၊ ဆံပင် ပြုပြင်ခြင်း ၀ါသနာမပါဘူး။ အခုမှ ဆံပင်ဖြူဆိုတဲ့ အသံက ကျွန်မကို လှုပ်နှိုးလိုက်သလိုပဲ … အိမ်မက်က လန့်နိုးလာတဲ့လူတစ်ယောက်လို မယုံနိုင်သလိုဖြစ်နေပြီး ငိုင်နေမိတယ်။ မျက်မှန်သေချာတပ်ပြီး အကြာကြီးမှန်ကြည့်နေမိတယ်။ တကယ်အိုသွားပြီပဲ … မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတွေတောင်ပေါ်နေပြီ … စိတ်မကြည်လင်မှုက မျက်နှာကို အရောင်ဟပ်နေတယ် … ပြုံးကြည့်တယ် … မဲ့ပြုံးပဲ ပေါ်လာတယ် … ရုပ်မှုန်တွေရဲ့ပျက်စီးနေမှုကို လှစ်ကနဲမြင်လိုက်ရတယ်။
နောက်ဆို ဇရာက အခုထက်ပိုပြီး တံခါးပြင်းပြင်းခေါက်တော့မယ်။ ဥပေက္ခာပြုမလား၊ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လေ့ကျင့်မလား၊ ဇရာကို ရသလောက်အနိုင်ယူမလား၊ သံဝေဂတရားတွေနဲ့ အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် လုပ်မလား၊ အမျိုးမျိုးတွေးကြည့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအဖြေက လူပီသနေပါသေးတယ်။ ဇရာကို ရသလောက်အနိုင်ယူလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ အသားအရေနဲ့ ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ထိန်းသိမ်းမယ်။ စိတ်၏ကြည်လင်မှုက ရုပ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုတာမို့လို့ စိတ်ကို ကြည်လင်အောင် အားထုတ်မယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ နဲအောင်လုပ်မယ်။ ပြုံးပြုံးလေးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။
ဘယ်လိုပဲ သံဝေဂစိတ်သွင်းသွင်း အဖြေကတော့ ကျွန်မ မအိုချင်သေးပါ …..
ကျုပ်တို့လို အဘိုးကြီးတွေ ဇွတ်မသိယောင်ဆောင်နေတာကို လက်လာတို့ရတယ်လို့…
ကျုပ်ကိုလဲ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က တံခါးတချက် စခေါက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ မကြာ မကြာ ပေါ့..။
နှစ်ပိုကြာလာတာနဲ့အမျှ ခပ်စိတ်စိတ်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဖြစ်လာတယ်…
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးက တရားတစ်ပုဒ်မှာ ဘုရင်တပါးက သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်ဖြူတစ်ချောင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ သံဝေဂရပြီး တောထွက်သွားတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့်ကျမတို့ကတော့ ဆံပင်ဖြူတွေများနေတော့ ရိုးသွားပြီး သံဝေဂရရမယ့်အစား ဆံပင်ဆိုးဖို့သာ စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့က ပွဲမှာ တွေ့ခဲ့တာတော့
မဝေက ၃၀ လောက်ရှိပြီလို့ ထင်ရတယ်ဗျာ။
ဒါနဲ့ မဝေ အသက်က ၃၀ ကျော်ပြီလားဗျ။
အင်းးးးး … စိတ်ချမ်းသာအောင် မြှောက်ပြောနေပြန်ပြီ …
မြှောက်ပြောမှန်းသိပေမယ့် သဘာဝကိုက အမြှောက်ကြိုက်တတ်တာဆိုတော့ ….
ကျွန်မပေးချင်တဲ့ message လေးက အဲဒီစာကြောင်းလေးပါပဲ …
ကျွန်မကျင့်သုံးနေတဲ့ အလှပြင်နည်းဖြစ်ပါတယ် … ၂၀၁၁ အတွင်းမှာ စိတ်မကြည်လင်မှုတွေအများကြီးကြုံရပြီး သိသိသာသာ အိုစာသွားပါတယ် … စိတ်ကိုပြန်ပြုပြင်ဖို့ အချိန်မီသတိပေးတံခါးလာခေါက်တဲ့ ဇရာကို ကျေးဇူးတင်မိရင်း ဒီပို့စ်လေးကို ရေးလိုက်မိပါတယ် …
ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးလားဟင်….အန်တီဝေေ၀ …
ကလေး ကားလေးပါ …. ရှေးခေတ်ကရိုက်ထားတာ..
ဒါပေသိ ဂီနှင့် အမွှာညီအစ်ကိုလား ..ထင်မှတ်မှားရလောက်အောင် ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့
ဂျော်နီဒက်ပ် ပြန်ရိုက်ထားတယ်ခည ….
အဲ့သည့်ထဲမှာ ..သူ့ဇာတ်ကောင် က ၀ီလီဝမ်ကာ …တဲ့ …
ချောကလက်အတွက်ဆိုရင် အသက်ကို ဘ၀ ကို မိသားစုကို …အားလုံးကို စွန့်နိုင်သူတဲ့လေ…
တနေ့ …ဆံပင်ညှပ်ရင်း..ဆံပင်ဖြူ တချောင်း …တွေ့ရာကနေ …ဇရာ-မရဏာ ကို မြင်ရင်း…
သူ့ ချော့ကလက် စက်ရုံ ကို အမွေဆက်ခံဖို့ လူလိုက်ရှာတဲ့ ဇာတ်ကားဗျ …..
ကျနော်ကတော့ လက်တလော သေတယ်ဆိုတာ …
ဘောလုံးတပွဲမှာ လူစားလဲခံထိတယ်လို့ပဲ မှတ်ထားတယ်ဗျာ. ..
အင်း …ကျနော်လည်း ကိုယ့်အစား …လောကကွင်းလယ်မှာ ၀င်ကစားမယ့်
ကိုယ့် SUBSTITUTE လေးတယောက် မွေးထုတ် …လေ့ကျင့် ပျိုးထောင် ပေးရဦးမှာပါလား..
အင်း .. ကြည့်ဖူးတယ် …
မိတ်ကပ်တွေအဖွေးသားနဲ့ ကာတွန်းရုပ်လိုပဲ မင်းသားက … အခြောက်ကြီးလိုပုံစံမျိုးနဲ့ …
အဲဒီမင်းသားနဲ့ ဂီနဲ့ မတူပါဘူး …
“ Well My Son ”
“ ကောင်းပြီ ငါ့သား ”
ကျနော်ကတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ သူ့ဘာသာသူပေါက်ချင်သလိုလာပေါက်နေတဲ့ဆံပင်
ဖြူချင်ဖြူ မဖြူချင်နေ ။
ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာကိုလုပ်ဘို့လောက်ဘဲ အာရုံထားတော့တယ်။
မှန်မကြည့်ဘူး ခေါင်းမဖြီးဘူး ဆံပင်တွေခေါင်းပေါ်သူဘာသူ သူ အလိုက်သင့်ကြည့်နေကြလိမ့်မယ်။
မဝေေ၇ အတူတူပဲ။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မအောက်က အငယ်နှစ်ယောက် ဆံပင်တွေ ဖြူလို့ ဆေးဆိုးတော့ ငါက နုတယ်ဟေ့ မဖြူသေးဘူးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကမှ ဘယ်နှယ့် ဆံပင်ဖြူ နှစ်ချောင်း ဂျိုစောင်းမှာ လျှာထုတ်ပြနေတာ တွေ့မှ မေ့ထားတဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို ပြန်သတိထားမိတော့တယ်။ ဘ၀သက်တန်းရဲ့ ၃ပုံပုံ ၂ပုံ ရောက်နေမှတော့ အော်..သူလည်း ဖြူသင့်ပါပြီလို့ ပြန်တွေးမိတယ်။
မှားတာရှိလျှင် ဝန္ဒာမိပါ ဟု တောင်းပန်ပါသည်
ဦးခေါင်းမှာ သေမင်း အလံထူထားနှင့်ပြီဖြစ်သော
…သားသားလေး ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
မဝေေ၀ကပြောတယ်- “လူ့သက်တမ်း ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက် ရောက်နေပေမယ့်” ….တဲ့
မမှီကပြောပြန်တယ်- “ဘ၀သက်တန်းရဲ့ ၃ပုံပုံ ၂ပုံ ရောက်နေမှတော့” .. တဲ့
အဲလိုဆို – ကျုပ်က သက်တမ်းစေ့တော့မယ်ပေါ့ …
အာခေါင်တွေခြောက်ပြီး ခေါင်းတွေတောင်မူးလာတယ် … :))
ပိုက်ဆံဆိုတာ လက်ထဲကျန်တာနဲလာလေ တန်ဘိုးရှိလာလေပါပဲ။
ဘ၀ကို ပိုတန်ဘိုးတက်စေမယ့် ဆံပင်ဖြူလေးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဗျာ….
မမဝေ ရေ ကျွန်တော်လဲငယ်ငယ်တုန်းက တချောင်းထွက်ဖူးတယ် (ဆံပင်ဖြူ) သူများတွေမေးကြည့်တော့ မိဘ မျိုးရိုး ကျန်းမာေ၇း သောက်သုံးဖူးတဲ့ ဆေးအာနိသင် သွေသား (အရပ်စကားနဲ့ပြောကြည့်တာ) စသည်စသည် အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ ဆံပင်ဖြူပေါက်တက်ပါတယ်တဲ့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့……………
တရားသဘောနဲ့ ပြောရရင်တော့ (ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်) သေမင်းဆိုတာ ကိုယ့်နောက်မှာ အရိပ်လို ကပ်လိုက်နေတာလေ.. အခုပုံစံက ကို့အရိပ်ကိုယ်ကြည့်ပြီး လန့်နေသလိုပဲ. ဘာမှမကြောက်နဲ့ တညင်သားရှိတယ်………..:)
အမှန်ပြောရရင် သေမင်းကို မလန့်ပါဘူး … ဘာလို့လန့်ရမှာလဲ … သေမင်းထက် ပိုလန့်စရာကောင်းတာက အနာရောဂါထူပြောခြင်းပဲ … ကျန်းမာရေးညံ့နေပြီး စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ခဲ့ရင် … အိုလာတဲ့နောက်မှာကပ်ပါလာမယ့် နာခြင်းကိုသာကြောက်ပါသည် …
မဝေ စိတ်မကောင်းမှာစိုးလို့ မဝေညီမက ထပ်မတွေ့ တော့ဘူးပြောတာ
သက်ရှိတိုင်း ဇရာ မရဏကို မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူးလေ.. တချို့ တွေဆို ဇရာဆိုတာတောင်မရောက်သေးဘဲ မရဏခရီး အပြီးသွားရတာတွေ အများကြီး.. မဝေအနေနဲ့ အသိဥာဏ် အလျင်ဦးနေတာကိုက သေခြင်းတရားအတွက် မကြောက်မရွံ့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ.. ဆံပင်ဖြူတာ သွေးသားကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်.. တချို့ ဆို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူတွေ ခေါင်းအပြည့် (ဒီ မလေးရှားက တချို့ တရုတ်ကလေးတွေဆို အသက်က ၁၀ နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး တစ်ခေါင်းလုံးဖြူပြီး မျက်မှန်က ပုလင်းဖင်ထက်တောင်ထူဦးမယ်) မကြောက်ပါနဲ့ မမြကလေးရယ် ဗိုလ်အောင်ဒင် မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာပါ ဟား ဟား
@ကိုဘလက်ရေ.. ကျုပ်အထင် မဝေက ၁၉၇၃ ဖွားဗျ..
ဆောရီး.. မဝေက ၁၉၇၄ ဖွား… မဝေ!!! မှန်ရင် မုန့် ဝယ်ကျွေး
ကိုငြိမ်းချမ်း လွဲသွားပြီ….! မဝေရဲ့အသက်ကို သိချင်ရင် ‘ ဒါ ကျွန်မရဲ့အိမ် ‘ ကို ပြန်ဖတ်ကြည့် 
အဲဒီမှာ သူ့ အသက်ကို ပြောခဲ့ တယ် ဗျ
မမှန်ပါဘူး ကိုငြိမ်းချမ်းရေ … မုန့်ဝယ်ကျွေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ..
မမဝေရေ ကျမဆံပင် ဆို အလယ်တန်း တက်တုန်းကထဲက ဖြူတာပါ. ဖြူတာမှ သူများလို ဆံပင်ဖြူပေါက်စလေးတွေ ပေါက်တာမဟုတ်ပဲ ဆံပင်အရင်းကနေ အဖျားထိ တချောင်းလုံး ဖြူသွားတာမျိုးပါ
ရောင်ခြယ်ဓာတ် နည်းသွားတယ် ခေါ်မလား ဓာတ်တခုခု ချို့တဲ့တယ် ခေါ်မလားပဲ…
ခုထိလည်း အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြူနေတာတွေ အများကြီးပါပဲ ငယ်ငယ်ထဲက ဆံပင်ဖြူပေါက်တာဆိုတော့ သိပ်ပြီး ခံစားမနေတော့ဘူး ပေါက်လာတော့လည်း ပေါက်တယ်လို့ မှတ်လိုက်တာပါပဲ ……..
အဲဒီမျိုးဆက်သစ်ထဲ.. ကိုယ့်သွေး..ကိုယ်ဒီအန်အေ လှည့်ပါတ်နေတာပါ..။
ကိုယ့်အလုပ်တွေကကောင်း/ဆိုးခဲံ့ရင်.. ကိုယ့်ရဲ့နာမ်..စိတ်ဓါတ်..အတွေးအခေါ်တွေကပါ.. တခြားသူတွေထဲ..ကမ္ဘာတည်သ၍ လှည့်ပါတ်နေဦးမှာပါ..
လောလောဆယ်တော့… အဖြူတွေမကြိုက်ရင် ဆေးဆိုးလိုက်…။
နောက် အနှစ်၂၀ဆို.. နုပျိုဆေးပေါ်နေမယ်လို့.. ဆေးသိပ္ပံက အတိအကျဆိုထားတယ်..။
ဗုဒ္ဓဟောတဲ့အတိုင်းပြောရရင် ဘ၀တစ်ခုသေသွားရင် နောက်ဘ၀တစ်ခုဆက်ဖြစ်မယ် … သံသရာထဲမှာ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေအုန်းမှာလို့ မသေဘူးလို့ ပြောနိုင်တာပေါ့ … ဒီဘ၀မှာ လုပ်သမျှ ကောင်းမှု မကောင်းမှုတွေကို နောင်ဘ၀မှာ အကျိုးဆက်ခံစားရအုန်းမှာပဲ .. သံသရာကလွတ်မြောက်အောင် အားမထုတ်သေးသ၍ သံသရာလည်နေအုန်းမှာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျန်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ သံသရာကလွတ်မြောက်အောင် အပြီးအပြတ်အားထုတ်ချင်စိတ်ရှိနေသေးတာမို့ သံယောဇဉ်တွေ၊ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အစီအစဉ်မရှိပါဘူး …
—— ဘယ်လိုပဲ သံဝေဂစိတ်သွင်းသွင်း အဖြေကတော့ ကျွန်မ မအိုချင်သေးပါ ——-
စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကို အလျှော့ပေးလိုက်တာပါပဲ
အသက်ကြီးပြီ မထင်လိုက်နဲ့ မဝေနဲ့ ကျွှန်တော် အသက်အတူတူပဲ
တရားထိုင်တယ် စိတ်ကိုစစ်တယ် ဒါကတပိုင်း
ကျွှန်တော်ကဗျာတွေကြည့်ပါလား အချစ်ဆိုတဲ့ အတွယ်အတာဝေဒနာတွေလေ
သမုဒယကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလျှက် ခံစားရေးဖွဲ့တာပဲ
ပျော်သလိုသာနေပါတယ် စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး
အားမလျှော့လေနဲ့ စာကောင်းတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ
အန်တီဝေ။။ ရှိပါတယ်၊ အပြင်က ဘယ်သူပါလဲ…..
အန်တီဝေ။။ (ခေတ္တမျှ အသံတိတ်သွားပြီးနောက်) အသံတုဖြင့်.. ဟို…ဟို.. အိမ်မှာလူကြီး တယောက်မှ မရှိပါဘူးရှင်၊ သမီးက သူ့တူမပါ။ အိမ်ခဏလာစောင့်ပေးတာ၊ တော်ကြာနေပြန်မှာ……
အသံရှင်။။ ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲ၊ သူနဲ့တွေ့ချင်လို့ အဝေးကြီးက လာတာ။ အိမ်ထဲဝင်စောင့်လို့ ရမလား….
အန်တီဝေ။။ (အသံတုဖြင့်) ခွင့်လွှတ်ပါရှင်၊ လူစိမ်းပေးမဝင်ရဘူး မှာထားလို့ပါ…..
အသံရှင်။။ ဒါဆိုလည်း မစောင့်တော့ဘူး၊ ပစ္စည်းလေးတခု ထားခဲ့ပါရစေ၊ သူ့အတွက် တကူးတက ယူလာလို့ပါ….
အန်တီဝေ။။ (အသံတုဖြင့်) ဒါလည်း ခွင့်လွှတ်ပါရှင်။ မသိတဲ့သူပေးတာမှန်သမျှ မယူရ ပြောထားလို့ပါ……
အသံရှင်။။ ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပါပဲဗျာ။ သွားလိုက်ပါအုံးမယ်….
ရက်အတန်ကြာပြီးနောက်…..အန်တီဝေ ဂျပန်မှဝင်လာသော အီးမေးလ်ဖတ်ရင်း အော်ငိုနေလေတော့သည်။။ အီး..ဟီး..ဟီး….သမင်းရေ နာမည်အကြားမှားလို့ပါ၊ နောက်တခါလာရင် မပုန်းတော့ပါဘူး။။ ပြန်လာခဲ့ပါတော့…..
အီးမေးလ်ပါ အကြောင်းအရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏…..
ကျနော် ကိုသစ် ဂျပန်ကနေ မြန်မာပြည် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်တုံး ရှီရှဲဒိုးအလှကုန်ဝမ်းဆက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ အိမ်လာသေးတယ်။ တူမလေးနဲ့ပဲတွေ့တယ်။ အိမ်မှာလည်း လူကြီးတယောက်မှမရှိ၊ ဘာပစ္စည်းမှလည်း ထားခဲ့လို့မရလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ပြန်ရောင်းစားလိုက်တာ တသိန်းကျော်ရတယ်။ အဲဒီပိုက်ဆံနဲ့ နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာကို အန်တီဝေ့နာမည်နဲ့ လှူပေးခဲ့ပါတယ်။ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။။
ကျွန်မကို ရှီရှဲဒိုးအလှကုန်ဝမ်းဆက်လက်ဆောင်ပေးရင် ဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ …. ??
အဲဒါကို ပြန်ရောင်းစားပြီး တစ်နေရာရာမှာ လှူပစ်လိုက်မှာ သေချာတယ် ….
အဲဒါကြောင့်မို့ ၀မ်းမနဲတဲ့အပြင် ၀မ်းတောင်သာသေး ….
ကျုပ် က တော့ ရှီရှဲဒိုး ဖိုး မတတ်နိုင်လို့ 
ကျိတ်မှန်ရွက် ဘဲ ပို့ ပေးချင်တယ်ဗျာ
ကျိတ်မှန်ရွက် အခြောက်လှန်းပြီး အုန်းဆီနဲ့ စိမ်လူး
ခြောက်တာတွေ စို သွားစေမှာ
မမဝေရယ်… မနောဆို တစ်ခေါင်းလုံး အဖြူဆိုးရင်ကောင်းမလားလို့တောင် စဉ်းစားနေတာ… နောက်စဉ်းစားမိတာ တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒါကတော့…
အမြဲသတိရနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုပါပဲ……
အခုတော့ ဆံပင်ဖြူ နှုတ်ရမှာ မဟုတ် အနက်နှုတ်ရတော့မလို ဖြစ်လာပြီ။
အို ဖြူချင်သလောက်ဖြူ ..ဆေးမဆိုးပဲ အံတုကြည့်အုံးမှာ၊
ဒီလို အဖြူလေးရဖို့ အနှစ် ၄၀-၅၀ စောင့်ခဲ့ရတာ။
အေးလေ .. ဟုတ်သားဘဲ ..
ဂလောက် အကျာကြီး စောင့်ခဲ့ရတာ ..
လွယ်မှတ်လို့ .. ဟွန့် …
ဆံပင်ကတော့ တခေါင်းလုံးဖွေးနေပါပြီ…အလုပ်နဲ့မို့ ပေါ့
““စိတ်၏ကြည်လင်မှုက ရုပ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုတာမို့လို့ စိတ်ကို ကြည်လင်အောင် အားထုတ်မယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ နဲအောင်လုပ်မယ်။ ပြုံးပြုံးလေးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။””
စလုံး ရောက်ခါစ ပုံနဲ့ ခု ပုံ ယှဉ်ကြည့်လိုက်တာ
ကွကိုယ် ဘယ်လောက် အိုစာသွားတယ် ဆိုတာ တွေ့သွားတယ်။
တရားနဲ့ အင်မတန် ဝေးတဲ့ သများကတော့ ကြောက်ပြီး အစားတွေ ပိုစားမိနေတယ်။
ဝဋ်တို့ လောကဓံတို့ကို မဖြုံခဲ့ပေမဲ့….
လောကကြီးမှာ သများကို လဲအောင်လုပ်နိုင်တာ …
ဇရာ၊ ဗျာတိ နဲ့ မရဏ ပဲ ရှိပါတယ်လေ။
၂ နှစ်တောင် ကျော်သွားပြီပဲ .. စာမရေးဖြစ်တာတောင်ကြာပေါ့ …
၂ နှစ်ကျော်အတွင်း ဆံပင်ဖြူ နောက်ထပ် ၃ ချောင်းပဲ ထပ်ထွက်သေးတယ် ..
ကျွန်မ အမေက အသက် ၆၀ ကျော်သွားတာတောင် အခုထိ ဆံပင်တစ်ချောင်းမှ မဖြူသေးဘူး ..
အနေအထိုင် အစားအသောက် ပုံစံလေးလည်း ပြောပါဦး …
သုတေသန ပြုရအောင်လို့ …. ဟီးးး
အဲ့လို ပြန်တက်လာမှ ပြန်ဖတ်မိတော့တယ်